डर लाग्दो सपना देख्नुको कारण के हो ?
मानिसहरू सपना देख्छन्, कहिले राम्रो र कहिले नराम्रो अर्थात् डरलाग्दो । डरलाग्दो सपना देखेपछि मानिस पसिना–पसिना भएर ब्युँझन्छन् पनि । तर, त्यस्ता डरलाग्दा अथवा नराम्रो सपना बिरामी हुने संकेत पनि हुन सक्ने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन् । कहिलेकाहीँ नराम्रा सपना रोगको लक्षण देखिनुभन्दा धेरै अघि पनि देखिन सक्छ । अनुसन्धानकर्ताहरूले...
घाम ताप्दा यस्तो फाइदा हुन्छ
२४ पुस । घामबाट धेरै किसिमको फाइदा हुन्छ त्यसैले सकेसम्म घाममा बस्नु जरुरी छ । घाममा बस्दाका निम्न फाइदाहरु हुन्छन् । रक्तचाप घटाउँछः सूर्यको प्रकाश छालामा पर्ने बित्तिकै रक्तनलीमा नाइट्रिक अक्साइड निस्कासन हुन्छ। युनिर्भसिटी अफ इडनबर्गको एउटा अनुसन्धानले नाइट्रिक अक्साइडले रक्तचाप न्यून गर्न सहयोग गर्ने देखाएको छ। तसर्थ...
हेटौँडामा सजिलो टेक्नोलोजीको औपचारिक शुरुवात
१२ पुस, हेटौँडा । सूचना प्रबिधीको बढ्दो प्रयोगलाई ध्यानमा दिदै हेटौँडामा सजिलो टेक्नोलोजीले औपचारिक शुरुवात गरेको छ । एक बर्षदेखि सञ्चालनमा आएको सूचना तथा प्रबिधी कम्पनीले हेटौँडा˗४ स्थित अजरअमररोडमा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको हो । कम्पनीले वेवसाईट दर्ता तथा निर्माण, सफ्टवयर, मोबाईल एप्लीकेशन निर्माण तथा सम्पादन गरिने सञ्चालक...
जाडोमा कस्तो छालामा कस्तो केयर ?
जाडोयाम शुरु भएको छ । जाडो याममा छालामा धेरै किसिमका समस्या आउने गर्छ । जाडोयाममा छालालाई सुरक्षित गर्न केही उपाय अपनाउने कि ? सुख्खा छाला एक कप ब्राउन सुगर, एक चम्चा दूधमा मिलाउने । त्यसलाई अनुहारमा लगाएर पाँच मिनेटसम्म राख्नुहोस् । त्यसपछि मनतातो पानीले धुनुहोस् । स्याउको पेस्ट एक चम्चा, दूधको तर एक चम्चा, जौको पीठो एक सानो चम्चामा मह...
टीका लगाउँदा दिने आशिर्वाद र अर्थ
२५ असोज, काठमाडौं । असत्य माथि सत्यको विजय, आसुरी भावमा दैवी भावको अभ्युदय, स्वर्गीय सुख र परम मुक्तिपद प्रदान गर्ने शक्ति स्वरुपा भगवती नवदुर्गाको नवरात्रीसम्म व्रत बसि विजया दशमीको दिन नवदुर्गाको प्रसाद टीका र जमरा ग्रहण गर्दा मान्यजनबाट दिने आशिर्वादका आशिर वचनहरू संस्कृत श्लोकमा यसरी दिन सकिने बताइएको छ । आयुर्द्रोण सुते श्रियो...
दशैंमा मासुजन्य रोगबाट कसरी बच्ने
मासु एक पौष्टिक आहार हो जसमा १५ देखि २० प्रतिशत प्रोटिन पाइन्छ । यसमा जिङ्क, भिटामिन बी, पोटासियम जस्ता तत्वहरु पनि प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन् । यी तत्वहरु हाम्रो शरीरलाई अत्यावश्यक तत्वहरु हुन् । तर, यसका बाबजुद मासुले धेरै किसिमका रोगहरु पनि निम्त्याउँछ । हार्वाड विश्वविद्यालयमा भएको एक अध्ययनअनुसार दैनिक रातो मासुको सेवनले मुटु रोग र...
कस्तो होला सुनको शौचालय ?
राजा–महाराजा तथा धनाढ्यहरूको कल्पनामा रहने सुनको शौचालय सर्वसाधारणहरूका लागि समेत खुला भएको छ । न्युयोर्कको सोलोमोन आर गुगेनहिम संग्रहालयले सुनवाट बनेको शौचालय आफ्ना आगन्तुकहरूको प्रयोगका लागि खुला गरेको हो । उक्त शौचालय इटालिका कलाकार मौरिजियो काटेलानले तयार पारेका हुन् । अधिकांश कलाकारले निर्माण गरेको सिर्जनालाई हातले छुन...
मोवाईल व्याट्री जोगाउने १० तरिका
धेरै मोवाईल प्रयोगकर्तालाई एउटै चिन्ता हुन्छ, व्याट्री चार्ज कसरी बढि समय जोगाउने । यसको ज्ञान नहुँदा चार्ज नसकियोस् भनेर चार्जर पाउने वित्तिकै चार्ज गरिहाल्ने बानि हामी सबैमा छ । यस्तो समस्या सामान्य उपाय अपनाएर पनि समाधान गर्न सकिन्छ । तलका १० उपाय अपनाउनु भयो भने अहिले भन्दा केही बढि समय व्याट्री चार्ज जोगाउन सक्नु हुनेछ । १)...
मोवाईल च्याट गर्न नयाँ एप
भिडियो कलिङ एप 'डुओ' सार्वजनिक गरेको गुगलले, नयाँ च्याट एप् 'आलो' (Allo) सार्वजनिक गरेको छ । स्मार्ट मेसेजिङ एप्‌को रुपमा सार्वजनिक भएको गुगलको 'आलो'ले, हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने विभिन्न च्याट एप्सहरुमा उपलब्ध फिचरहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याउन कोशिस गरेको झैँ देखिन्छ । 'आलो'मा गुगल असिस्टेन्टसँग च्याट गर्ने देखि लिएर,...